Kungani Sidinga iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Yize ukuguga kungenakugwenywa, kukhona amathuba okuhlehlisa inqubo, ngiyabonga I-Nicotinamide Mononucleotide (i-NMN). Ukuphila ngokuguga okuvuthiwe kuyiphupho lawo wonke umuntu futhi kunezinhlanganisela ezifana neNMN esisiza ukufeza iphupho.
Ngiyazi ukuthi mhlawumbe uyazibuza ukuthi le nhlanganisela ihlangana kanjani nokuguga. Hlala ubambe izibhamu zakho ngoba ngizobe ngikuthatha ngezinzuzo ze-nicotinamide mononucleotide.
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) isanduleli se-NAD +. I-NAD + iyi-biomarker ebalulekile esitokisini somuntu. Njengoba siqhubeka eminyakeni, leli khemikhali liyawohloka ngenxa yemisebenzi eminingana ye-enzymatic. Ngaphezu kwalokho, isilinganiso sokusebenzisa ngaso sonke isikhathi sihambelana ngokuqondile ngezinga lokukhiqizwa.
Into ebalulekile okufanele uyiqaphele ukuthi, ngokungafani nezindlela eziningi zokwelapha ukuguga ezikushiya unezimpawu ezingenakuphikwa, Imiphumela emibi ye-NMN asondele kokungasebenzi. Ngivumele ukuthi ngikhanyise ukukhanya kokuthi i-NMN ilithinta kanjani isikhathi sakho sempilo.
Yini iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
I-Nicotinamide Mononucleotide (Nmn) powder (1094-61-7itholakala ku-niacin. Kungumkhiqizo ovela ekuphenduleni phakathi kwe-nicotinamide ribose neqembu le-phosphate. Le nhlanganisela ibamba iqhaza elibalulekile kwi-biosynthesis ye-NAD + (nicotinamide adenine dinucleotide), ebaluleke kakhulu emisebenzini yamaselula yamakhemikhali.
Ekuhlanganisweni kwe-NAD +, i-Nicotinamide Mononucleotide powder powder isebenza njenge-substrate ye-nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, eyi-enzyme ebhekele ukuyiguqula ibe yi-NAD +.
I-NMN uphakathi kwemithombo emikhulu yamandla amaselula emzimbeni womuntu. Njengoba kungumanduleli we-NAD +, ukwehla kwendawo eyodwa kuzothinta kabi enye.
Ocwaningweni olusanda kwenziwa, iNicotinamide Mononucleotide iqinisekisile ukuthi ingumthombo ophakathi kwesizinda sezokwelapha. Okhunye okuqakathekileko bekukufezeka kweqhaza elikhulu lendawo ebekiwe ekubuyiselweni kwesizungu kanye nokubamba inqubo yokuguga.
Muva nje, kukhona ucwaningo oluthembisayo mayelana nokuphathwa komdlavuza we-nicotinamide mononucleotide.
Yini Ukudla Okuqukethe I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
Yiziphi Izinzuzo zeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Uzovumelana nami ukuthi ukuguga nezinwele ezimpunga zihambisana nokuhlakanipha. Kodwa-ke, injabulo yalokhu kukhulu ihlala isikhashana lapho uqala ukuba nezikhathi eziphezulu. Njengoba sikhula ngeminyaka, imizimba yethu iguquka ibe yizibalo zezifo.
Ukuguga kushiya umthelela omkhulu ekusebenzeni kwamaselula. Isibonelo, amazinga we-NAD + neNicotinamide Mononucleotide ancipha kakhulu phakathi neminyaka yegolide. Yize umzimba usasebenza amakhemikhali, izinga lokusebenzisa lidlula kakhulu imvamisa yokuphinda uzalwe.
Endabeni yomonakalo we-DNA, i-NAD + isebenzisa i-PARP1, iprotheni elungisa iDNA, ukubuyisela ama-organelles athintekile.
Ukwehla kwe-NMN kuthinta amazinga e-NAD + futhi ngemuva kwalokho kuholele ekwehlisweni kokukhiqizwa kwamandla yi-mitochondria.
Ucwaningo olwenziwe nguDkt.Sinclair, isazi sezakhi zofuzo esivela eHavard University, luqinisekisa ukusebenza kahle kwesengezo se-nicotinamide mononucleotide ekwehliseni ukuguga. Isazi siyavuma ukuthi yena nobaba wakhe bathatha isengezo futhi ngokuqinisekile sithuthukisa inkumbulo futhi silola nengqondo yabo.
Ukwelashwa kwesifo sikashukela II
Ukwehla kwezinga le-nicotinamide adenine dinucleotide kungadala isifo sikashukela sohlobo II.
Ukuphatha iNicotinamide Mononucleotide kuzothuthukisa kakhulu ukungabekezelelani kwe-glucose nokuzwela kwe-insulin ezigulini ezinesifo sikashukela. Ngaphandle kwalokho, ezinye izazi zofuzo ziveza ukuthi ukwelashwa kuguqula ukubonakaliswa kofuzo okungenxa yokudla okunamafutha aphezulu.
Lapho amazinga e-nicotinamide adenine dinucleotide ewa, isimo sengqondo sisengozini.
Ukuphatha i-NMN kukhulisa ubungako be NAD +, yingakho evikela ubuchopho emonakalweni. Kafushane nje, iNicotinamide Mononucleotide isizakala ngemisebenzi ye-neuronal nokuqonda, kufaka phakathi, ukufunda, nememori.
Ngalesi sizathu, ukwelashwa kusetshenziselwa ukuphatha isifo se-Alzheimer's, Parkinson's syndrome, dementia.
Ukuhlola okuthile kufinyelela lokhu okungenhla izinzuzo ze-nicotinamide mononucleotide ngokuqinisekisa ukuthi isengezo sisebenzelana kahle nomonakalo we-intracerebral. Lapho abacwaningi belawula lo muthi kumagundane amadala, izifundo zibhalise ukuthuthuka okukhulu ekukhiqizeni i-intracerebral NAD +. Ngenxa yalokhu, kwaba nokuncipha okwalandela kokugwazwa kwe-ischemic nokulimala kwemizwa.
Izinga le-Optimum NMN emzimbeni lihumushela ekwandeni kwe-NAD +, elawula imisebenzi ye-metabolic yamandla, ukulungiswa kwe-DNA, nokuphendula ekucindezelekeni. Kusukela I-Nicotinamide Mononucleotide kuthinta ngqo imetabolism, ukushoda kwayo kungadala izimo eziningana zokuqina komzimba njengokukhuluphala, isifo sikashukela, isibindi esinamafutha kanye ne-dyslipidemia.
Endabeni yokungabekezeleli ushukela, i-NMN ingena ukuze kuthuthukiswe umsoco we-metabolism.
Ucwaningo luqinisekisa ukuthi ungalahlekelwa kuze kufike ku-10% wesisindo somzimba wakho uma uthatha i-NMN. Njengoba uDkt Sinclair akubeka, umthelela wesilinganiso esisodwa se-NMN sabantu silingana nokugibela.
Khohlwa ngamathani ama-kits kits kanye nokuhlinzwa kobuso okukushiya uneziphuphutheki ezingenakufinyeleleka.
Njengoba ososayensi bekubeka, sesindala njengama-artery ethu. Ngalesi siphawulo, ungasho ukuthi ukuhlehlisa i-atrophic ye-vascular kanye ne-senescence yemithambo yethu yegazi kuzodlala iqhinga esikhathini sethu sokuphila.
Yini ehlukanisa ubusha kanye nokuguga ukukhula kwengqondo nokukhumbula izicubu zomzimba. Yize zonke lezi zici zithuthuka ngokuzivocavoca okujwayelekile, i-senescence iphikisana nokungahambi kahle nezicubu zomzimba ziba buthaka ngenkathi ukuphuma kwegazi kuncipha ngaphakathi kwalezi zinhlelo.
Ngivumele ngichaze ngombono wesayensi. Lapho amaseli e-endothelial womuntu ewohloka ngamaprotheni eSirtuin1, ukuphuma kwegazi kuzokuwa kakhulu. Kufanele uqonde ukuthi i-NMN ngumlawuli osemqoka we-SIRT1. Ngakho-ke, ukuphatha lesi sengezo kuzosebenza ku-Sirtuin-signaling, okuzokhiqiza ama-capillaries amasha ukuhlinzeka nge-oksijini nezakhi emisipha nakwezinye izitho ezibalulekile.
Ngakho-ke, yini konke mayelana ne-nicotinamide mononucleotide vs riboside?
Yebo, bobabili bangamanduleli weNAD +.
Ukubheka ngezinhlaka zabo zamakhemikhali kuzokutshela ukuthi i-NMN inosayizi omkhulu wamangqamuzana kune-NR. Ngakho-ke, riboside nicotinamide ungawenza ngomzimba womuntu ngaphandle kwesidingo sokwehla yonke i-molecule yayo.
Kodwa-ke, kunenhlansi yethemba lapho ucwaningo lwamuva nje luqinisekisile ukuthi kukhona umgibeli ongaqondakali ovumela ikhemikhali ukuthi idlule inqubo yokugaya. Ucwaningo lwakudala lusebenze kulokhu kuze kufike lapho abanye ososayensi bethola iprotheni yeSc12, esiza ukuguqulwa kweNMN kube yi-nicotinamide adenine dinucleotide.
Abasebenzisi abaningi bathola ukuthi intengo ye-nicotinamide mononucleotide iphakeme kancane kunaleyo ehambisana nayo i-riboside.
Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Ucwaningo
Yize kukhona izifundo eziningi zokucwaninga futhi zinkulu Ukubuyekezwa kokungeza kwe-NMN selokhu latholakala ngo-1963, ngicela ungivumele ngithinte kumaphrojekthi aqaphelekayo.
I-NMN Ixhasa Ubusha
Kusukela ngo-2013, uDkt Sinclair ubelokhu ebambe iqhaza ekutadisheni i- I-Nicotinamide Mononucleotide supplement kanye nendima yalo njengesengezo sokulwa nokuguga. Ephepheni lakhe locwaningo, isazi sezakhi zofuzo sibonile ukuthi ukwelashwa kuthuthukise amandla emisipha kanye nokwakheka kwezimodeli zamagundane. UDkt Sinclair uqhathanise ukusebenza kwe-NMN nokusebenza.
Ngokucwaninga, lo geneticist weHarvard akazange aqophe imiphumela emibi yokungezelela ye-NMN.
Indima evikela Cardio ye-NMN
Ocwaningweni olwengeziwe lwe-NMN lwango-2014, u-Yamamoto nabangane bakhe banquma ukuthi i-NMN inezindawo zokuvikela i-cardio. Ukuphatha isengezo kuzovikela inhliziyo ekuphindaphindeni nasekulimaleni kwe-ischemic.
Ngemuva kweminyaka emibili, uDe Picciotto nozakwabo abasebenza naye bathola ukuthi i-NMN ingakhuthaza ukusebenza kwemithambo yegazi.
I-NMN Combats Neurodegeneration
Ngo-2015, uLong kanye nethimba lakhe baphawula ukuthi i-NMN engeza ingalapha i-Alzheimer's futhi inciphise izimpawu zayo ezimbi. Ngemuva konyaka, uWang nethimba lakhe lososayensi baphetha ngokuthi ukwelashwa kuzoqeda ukuphazamiseka kwengqondo nokukhubazeka kwe-neural.
Eminyakeni eyalandela, ososayensi abacwaningayo be-NMN bakhuphukele ukuxhasa ukusebenza kweNicotinamide Mononucleotide ekwenzeni ngcono imisebenzi yokuqonda.
I-NMN Ithuthukisa Imisebenzi Yomzimba kanye ne-Immunological
Ngo-2013, uMills nethimba lakhe bathola ukuthi i-nicotinamide mononucleotide (NMN) ingaphatha uhlobo lwesifo sikashukela sohlobo II. Eminyakeni emithathu kamuva, wasungula ukuthi izengezo zibala ukwehla komzimba nokuzivikela kwamagundane amadala. Ngawo lowo nyaka, ama-Mills ahlangana no-Yoshino no-Imai ukutadisha ukuthi i-NMN iyithinta kanjani i-vascularity nendima yayo ekucindezelekeni kwe-oxidative.
I-NMN Myperious Transporter
U-Imai nethimba labafundi be-biochemists bathola iSlc12a8, esiza ekusizeni i-Nicotinamide Mononucleotide emzimbeni. Inqubo iyashesha futhi izothinta kabi i-NMN bioavailability.
Kusukela ngonyaka ka-2017, Izazi zaseKeio (Tokyo) naseWashington University ziye zaqhubeka nokuzibandakanya ekuvivinyweni kwemitholampilo kwe-NMN phakathi kwezifundo ezindala kodwa ezinempilo.
Izinhloso zalezi zivivinyo zabantu ukusungula ukuphepha kwe-nicotinamide mononucleotide nokuqonda ukuthi isengezo sithinta kanjani imisebenzi ye-beta-cell. Ngaphandle kwalokho, ososayensi bokucwaninga bafuna ukuthola ukuthi ngabe bakhona Imiphumela engemihle yokungezelela ye-NMN.
Umthamo weNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Cishe umbuzo owela emqondweni wakho uthi, "Kufanele ngithathe malini i-NMN?" Hhayi-ke, ake ngikuhlephulele.
Umthamo ojwayelekile we-NMN wabantu cishe u-25mg no-300mg ngosuku. Kuzo zonke izivivinyo zemitholampilo ezitholakalayo, izifundo zingathatha isamba esingu-250mg / ngosuku.
UDkt Sinclair uyavuma ukuthi uthatha cishe i-750mg ye-NMN ngosuku. Uma uhlela ukubukeza ukubuyekezwa kokungezelelwa kwe-NMN online, uzobona ukuthi abanye abasebenzisi benyuka baye ku-1000mg / ngosuku. Yize engekho amarekhodi aziwayo emiphumela emibi ye-nicotinamide mononucleotide, kufanele unamathele kudosi eliphansi kakhulu ngangokunokwenzeka.
Ngabe i-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Iphephile
Kuze kube manje, ayikho idatha engamangalela iNicotinamide Mononucleotide njengengaphephile. Kusuka kumarekhodi ashicilelwe ngesikhathi sokuhlolwa komtholampilo, asikho isihloko esasibhalise noma yimiphi imiphumela emibi ye-nicotinamide mononucleotide. Ngaphezu kwalokho izifundo zangaphambi kokuphumelela ziphumelele ngaphandle kokurekhoda noma yiziphi izimpawu ezimbi.
I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Isengezo
Njengoba i-nicotinamide mononucleotide ingakatholi ukugunyazwa okugcwele yi-FDA, ayinakuba ngumuthi kadokotela. Noma kunjalo, ungayithatha njenge- ukwesekwa kokudla.
Yize ungayithola ezitolo zezidakamizwa zasendaweni, indawo ekahle yokuthenga umkhiqizo iku-inthanethi. Ungathenga i-nicotinamide mononucleotide powder ngobuningi ocwaningweni lwakho noma uye kwisengezo sokudla. Kodwa-ke, qiniseka ukuthi uthenga kumhlinzeki osemthethweni we-beta-nicotinamide mononucleotide.
Ukwandisa i-bioavailability ye-NMN, kufanele ukhethe amaphilisi ezilimi ezingaphansi kunezibhebhe zomlomo.
Ngokwezindinganiso ze-FDA, umuntu udinga okungenani i-560mg yeNicotinamide Mononucleotide ngosuku. Okufanele ukwazi ukuthi i-broccoli neklabishi kubhalisa amanani aphezulu kakhulu e-NMN uma kuqhathaniswa nokunye ukudla nezithelo.
Isibonelo, i-broccoli iqukethe phakathi kuka-0.25mg no-1.12mg wamakhemikhali. Ngakho-ke, uma ufuna ukugcina isimo esinempilo futhi ulalela izidingo ze-FDA, kuzodingeka udle amakhilogremu ayi-1500 we-broccoli ngosuku. Njengoba ukwenza lokhu kungenzeki ngendlela emangalisayo, kufanele ukhethe ukuthenga isengezo kumhlinzeki we-beta-nicotinamide mononucleotide.
Co-founder, ubuholi benkampani obuyinhloko bokuphatha I-PhD itholwe kuFudan University ku-organic chemistry Isipiliyoni seminyaka engaphezu kwesishiyagalolunye emkhakheni we-organic synthesis wemithi yokwelapha. Isipiliyoni esicebile kumakhemikhali ahlanganisayo, chemistry yezokwelapha kanye nokwenziwa ngokwezifiso nokuphathwa kwephrojekthi
Yao, Z., et al. (2017). INicotinamide Mononucleotide Inhibits JNK Ukwenza kusebenze ukuguqula isifo se-Alzheimer.
UYoshino, J., et al. (2011). INicotinamide Mononucleotide, Key NAD (+) Intermediate, Iphatha i-Pathophysiology ye-Diet ne-Age-Indedu Diabetes kuMice. I-Cell Metabolism.
Yamamoto, T., et al. (2014). I-Nicotinamide Mononucleotide, i-Intermediate of NAD + Synthesis, Ivikela Inhliziyo kusuka ku-Ischemia naku-Reperfusion.
U-Wang, Y., et al. (2018). I-NAD + Supplementation Normalize Izici Ezikhethekile ze-Alzheimer's kanye Nezimpendulo Zokulimazeka kweDNA kuModeli eNtsha ye-AD Mouse nge-Yethulwa Ukulungiswa Kwe-DNA.
U-Keisuke, O., et al. (2019). Imiphumela ye-Altered NAD Metabolism ku-Metabolic Disriers. Ijenali yeSayensi yeBiomedical.
1.Kungani Sidinga iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
2.Yini iNicotinamide Mononucleotide (NMN)
3.Yikuphi Ukudla Okuqukethe I-Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
4. Ziyini Izinzuzo ZeNicotinamide Mononucleotide (NMN)
6. Ucwaningo lweNicotinamide Mononucleotide (NMN)
7. Isikali seNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Isengezo seNicotinamide Mononucleotide (NMN)
Izinzuzo Zokuphila Ezinsundu Ezimnyama kanye Nesicelo
I-L-Ergothioneine (EGT): Ukudla ‐ Kutholwe i-Antioxidant Enamandla Okwelapha